Walaac laga muujiyay xaaladda Siyaasadeed ee dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Walaac laga muujiyay xaaladda Siyaasadeed ee dalka
Khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya ayay ku tilmaameen mid niyad jab ku ah bulshada Soomaliyeed oo filaayey, in dalka ay ka qabsoomaan doorashooyin xasilooni ku qabsooma, dalkana u horseeda isbedel wanaagsan oo dhanka horumarka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Walaac xooggan ayay ka muujiyeen Urrurada Bulshada rayidka Soomaaliyeed khilaadka aan weli xalka laga gaarin ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaara Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
War qoraal ay soo saareen Urrurada Bulshada rayidka ayaa lagu muujiyay sida ay uga xun yihiin is faham la’aanta Farmaajo iyo Rooble ee la xiriira khilaafka awoodaha dowladadeed ee soo kala dhex galey labada xaafiis.
Khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya ayay ku tilmaameen mid niyad jab ku ah bulshada Soomaliyeed oo filaayey, in dalka ay ka qabsoomaan doorashooyin xasillooni ku qabsooma, dalkana u horseeda isbedel wanaagsan oo dhanka horumarka ah.
“Bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in khilaafka siyaasadeed saameyn ku yeelan karo hay’adaha dowladda, si taas looga waantoobo waxaa habboon in mas’uuliyad dheeri ah la muujiyo oo la xakameenayo khilaafka siyaasadeed.” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Urrurada Bulshada ragidka.
Waxay sidoo kale muujiyeen walwalka ay ka qabaan saameynta uu khilaafka siyaasadeed ku keeni karo geedi socodka doorashooyinka, nabada iyo degenaashaha dalka.
Afar qodob oo ay u arkaan in ay xal u noqon karaan khilaafka siyaasadeed iyo dhameynta kiiska Ikraan Tahliil ayay soo bandhigeen Urrurada Bulshada rayidka, waxayna kala yihiin.
1. In aan arrinta Ikraan Tahliil la siyaasadeen, baaritaan dhab ahna lagu sameeyo, loona madaxbaneeyo maxkamadda ciidamada ee dacwada Ikraan gacanta ku haysa.
2. Wadahadalka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble in uusan marnaba istaagin, si loo dhameeyo khilaafka siyaasdadeed ee la xiriira awoodaha sharciga.
3. In laga fogaado caqabado is hortaag ku sameyn kara geedi socodka doorashooyinka.
4. In madaxdu danahooda gaarka ah ka hormariyaan tan guud .
Duubabka, Odayaasha dhaqanka, Culimada, wax garadka, haweenka iyo aqoonyahannada Soomaliyeed ayay ku booriyeen in ay u istaagan sidii loo heli lahaa xal dhab ah oo lagu xaqiijinaayo dhameystirka khilaafka siyaasadeed.
Halkan hoose ka akhriso war-saxaafadeedka ay soo saareen.